सत्तागठबन्धनमा आज निर्णायक वार्ता, प्रधानमन्त्रीको कुर्सि धरापमा — Imandarmedia.com
सत्तागठबन्धनमा आज निर्णायक वार्ता, प्रधानमन्त्रीको कुर्सि धरापमा
काठमाडौ। सत्ता सहयात्री दलहरूको असहमति र प्रमुख प्रतिपक्षीको असहयोगबीचमै प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रवेश गराए पनि संसद्मा टेबुल गर्न सहमति जुटेन, अब शुक्रबारको संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको योजना छ।
यसबारे सत्तागठबन्धनमा आज निर्णायक वार्ता हुँदै छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुनसुकै अवस्थामा पनि एमसिसी संसद्मा लगिछाड्ने अडानमा रहेपछि पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा ठूलो मतभेद देखिएको छ।
सत्ता सहकार्य र एमसिसीको भविष्यबारे बिहीबार दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमा गठबन्धनको ‘निर्णायक’ बैठक बस्दै छ। हरहालतमा एमसिसी संसद् लैजाने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी र एक्लै अघि बढे सरकारबाट बाहिरिने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अडानपछि गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा छ।
यही अन्योलबीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार गठबन्धनको ‘निर्णायक’ बैठक बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा बुधबार संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुलको पक्षमा थिए। यसका लागि उनले कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूमार्फत कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एजेन्डासमेत प्रवेश गराएका थिए।
तर, त्यहाँ सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति नभएपछि बुधबार एमसिसी संसद्मा टेबुल हुन सकेन। संसद्को अर्को बैठक शुक्रबार बस्दै छ । आगामी बैठकमा जसरी पनि एमसिसी टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ।
आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठक सकेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार गएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा अन्तिम छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाएका थिए । सोहीअनुसार बिहीबारको बैठक गठबन्धनको भविष्यका लागि निर्णायक हुने सम्भावना छ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बिहीबारको बैठकले गठबन्धन र एमसिसीबारे अन्तिम फैसला गर्ने बताए। एमसिसीमा अहिलेसम्म धेरै नै छलफल र बहस भइसकेको छ। गठबन्धनभित्र र बाहिर पनि कांग्रेसले सम्पूर्ण प्रयास गरेको छ।
बिहीबार गठबन्धनभित्र रहेका अन्य दलको धारणा सुन्छौँ, त्यसपछि धेरै पर्खिने हुँदैन, प्रवक्ता महतले भने, कांग्रेस आगामी बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने पक्षमा छ। गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउनैका लागि अन्तिम प्रयास गर्न बैठक बोलाइएको छ।
उनले बैठकमा पक्ष वा विपक्ष जे–जे भए पनि सबैले आ–आफ्नो धारणा राख्ने र अघि बढ्ने बताए। पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको जसपाबाहेक अन्य सबै दल एमसिसीमा स्पष्ट छन् । सबै दलले गठबन्धन जोगाएरै एमसिसी किनारा लगाउने प्रयास जारी राखेका छन्।
तर, गठबन्धन बनाएर एउटै सरकारमा रहेका दलहरू कोही प्रस्तावको पक्ष त कोही विपक्षमा हुँदा सँगै रहने वा छुट्ने भन्ने बिन्दुमा पुगेका छन् ।कांग्रेसले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न पार्टीभित्र एकमतले निर्णय गरिसकेको छ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि संसदीय दलको बैठकबाट राष्ट्रिय सहमतिविना एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न नहुने र यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने धारणा तय गरेको छ।जबर्जस्ती भए सरकारबाट बाहिरिने माओवादी केन्द्रको निर्णय छ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने। गठबन्धनको निर्णयविना सरकार वा कुनै घटकले एमसिसी अगाडि बढायो भने गठबन्धन तोडियो भन्ने हुन्छ। गठबन्धन तोडिनु भनेको सरकारबाट अलग हुने हो।
बुधबार एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तीव्र चाहना भए पनि माओवादी केन्द्रले संसदीय दलबाट गरेको निर्णयपछि उनी पछि हटेका थिए। बैठकस्थलबाट देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले पार्टीको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री–प्रचण्ड संवादमा के भयो ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बुधबार बिहान भएको छलफलमा सरकार गठन हुने वेलादेखिका विषयमा संक्षिप्तमा समीक्षा भएको थियो।
छलफल गरेरै एमसिसी सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश नगरिएको प्रचण्डको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू एमसिसी पारित गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको बताएका थिए। स्रोतका अनुसार प्रचण्डको जवाफ थियो।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गठबन्धन अगाडि बढ्ने हो। तपाईंले जबर्जस्ती एमसिसी टेबुल गर्नुभयो भने हामी सरकारमा रहँदैनौँ, बाहिरिन्छौँ। तपाईंले चाल्ने कदम हेरेर निर्णय लिन्छौँ।